Koreen Boordii Hoji Raawwachiistuu Majlisa Federaalaa, tarkaanfiin hojii irraa ugguruuf itti fudhatame "kan seeraa alatti" jedhe - NuuralHudaa
Koreen Boordii Hoji Raawwachiistuu Majlisa Federaalaa, tarkaanfiin hojii irraa ugguruuf itti fudhatame “kan seeraa alatti” jedhe
Manni marii Ulamaa Itoophiyaa guyyaa lama dura, Koree Boordii hoji raawwachiistuu Majlisa Federaalaa haal-duree tokko malee hojii irraa ugguruu xalayaan beeksise. Boordichi tarkaanfiin fudhatame kan seeraa alaati jechuun balaaleeffate.
Boordichi xalayaa guyyaa har’aa hoggantoota mana marii dhimmoota Islaamaa naannoolee Saglanii fi Bulchiinsota magaalaa Lamaaniif barreese irratti, Tarkaanfiin Pirizdaantii mana marichaa irraa miseensoota boordichaa hojii irraa ugguruuf fudhatame, kan Majlisicha miidhu, kan beekkamtii kora waliigalaa mana marichaa hin qabnee fi kan seeraa alaa tahuu ibse.
Akkasumas xalayaan miseensoota boordichaa hojii irraa ugguruu ittiin ibsameen kun namoota hoggansa Majlisichaa ala tahan, kanneen tokkummaa hawaasa Muslimaa diiguu fi jijjiirama Mana Marichaa keessatti taasifamu gufachiisuuf yaalaniin kan qophaa’e tahuu irra geenyee jira jedhe.
Haaluma kanaan xalayaan kun kan murtii kora walii galaa Mana Marichaa qophaa’e tahuu ibsuun, hoggantoonni Majlisa naannoolee fi bulchiinsota magaalaa xalayaa murtii kora walii galaa alatti dabarfame kan akkasii akka hin Qeeballe beeksise.
Xalayaa Koree Boordii Hoji Raawwachiistuu Majlisa Federaalaa Amajjii 19,2013
August 4, 2021 sa;aa 1:36 pm Update tahe